Uru Solar Powered ụgbọ okporo ígwè na-agafe n'ókè Ma Road ịrịba ama | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem ụgbọ oloko > Uru Solar Powered ụgbọ okporo ígwè na-agafe n'ókè Ma Road ịrịba ama
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Njem ụgbọ oloko
(Emelitere ikpeazụ On: 31/03/2020)
Na-eto eto-emekarị n'ebe ndị ọzọ environmentally-enyi na enyi ka edemede ọtụtụ, na iche iche akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, atumatu ụwa, na nnukwu obodo na obere obodo myiri. Otu n'ime ọtụtụ ihe ịrịba ama nke a na-na-na-amụba ojiji nke ogbara ohuru na ndị mmadụ ná ndụ kwa ụbọchị na-arụ ọrụ na ngalaba na ọ dịtụbeghị mgbe a na-atụle otu nhọrọ tupu. One dị otú ahụ ebe bụ nchekwa nke okporoụzọ, ebe ọ na-tinye n'ọrụ na ihe niile si ụzọ ịrịba ama iji okporo ụzọ ọkụ ka egosi usoro, si otú a mee ụzọ ọnọdụ ọzọ anya na a ọnụ ala price, na kwa azọpụta ma ego and the planet in the process.
Ka ihe ịrịba n'okporo ụzọ na-adịghị n'ezie mkpa ka a udo aka ịrụ ọrụ ha, ọkụ maa nwere ihe kwukwara uru na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ maara. Solar-kwadoro ụzọ ịrịba ama onwem na Ikanam ọkụ nye n'aka maka mma ọhụhụ, ma n'oge ehihie na abalị (I nwere ike chọpụta ihe banyere ha ụkpụrụ nke ime ihe Ebe a) Ha na-enye a ezi ịkpa nso ọbụna n'oge aka ike ọnọdụ ihu igwe nke na-emekarị ike mberede-ewekarị ọnọdụ. N'agbanyeghị ebe ha - na gaferịtara ibe, crossroads ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè crossings, these signs ensure greater safety for pedestrians and vehicles alike.
Train Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Chekwa ụgbọ oloko, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Main Uru Of Solar-kwadoro Road ịrịba ama
The uru dị ukwuu na uru nke ndị a ihe ịrịba ama bụ na ike nke na-enye ha nri anaghị si ọkụ fosil fuels. Ọ na-adịghị emetọ n'ụzọ coal, mmanụ, na gas do, nke na-eme ya 100 percent environmentally-enyi na enyi. The naanị ọnọdụ na-ezu anwụ na-acha awa iji maka ìhè anyanwụ na-egbute, tọghatara na echekwara maka afọ-ogologo oge iwere. Ka tricky dị ka a mkpa nwere ike iyi, ugboro ebubo, echichi bụ n'ezie echekwa n'ihi na nke uche na ije, nke na-enyere posts dị ka nke a na-arụ ọrụ naanị mgbe e nwere ezigbo okporo ụzọ na ụzọ, kama gburugburu elekere. Anyanwụ ike ojiji na-achị na n'ezie na-adọrọ mmasị, na-adịghị na ha?
Ebe ọ bụ na ndị a nrụnye na-esi ike ileghara, ha welie mmata nke ọkwọ ụgbọala na pedestrians na roundabouts, adọba ụgbọala, ize ndụ ebe na-mara kpatara ihe mberede, wdg. The eziokwu na ha adịghị mkpa wires ma ọ bụ ihe ọkụ iyi dị nso iji rụọ ọrụ mere ka o kwe omume na-edebe ha n'ebe ọ bụla, e wezụga eziokwu na ha bụ n'ezie ndị na ọnụ ala na ala-na-na-arụzi. Ihe ọzọ uru bụ eziokwu na ha bụ otú mfe iji wụnye - ha nwere ike mmasị ma na-adịgide adịgide posts ma ọ bụ a obere onye ka ukwuu agagharị. Nke a na-eme ka ha oké n'oge roadworks, dị ka ha nwere ike na-edi na-ewepụ ke fọrọ dịghị oge na enweghị na-eme emeghasịkwa dị nso ebe e mere maka.
Solar ụgbọ okporo ígwè n'ókè
Ụgbọ okporo ígwè ịgafe n'ókè na ahu nagide ìhè anyanwụ ike nwere ike ji mee ma ulo oru zones na ime obodo ebe. Ngwaahịa nke ụdị, dị ka https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ detect approaching trains by virtue of wireless sensors, na mgbe ha ga-esi na mgbaàmà, ha rụọ ọrụ ịgafe ọkụ na ụda olu na-aga na ruo mgbe ụgbọ okporo ígwè gafere na ọ bụ nchebe ịgafe tracks. Ndị a n'ókè na-emekarị na-aga na abụọ ọ bụla n'akụkụ ụgbọ okporo ígwè ahụ ngafe, na a wireless njikọ tụụrụ ha na gbanyụọ n'otu oge. Eleghị anya, ihe kasị mma banyere wụnye ndị bụ eziokwu na e nweghị mpụga igbe ma ọ bụ ogologo Gịnị aka.
The dum usoro na-adabere ná anyanwụ ike nke na-bụ iji ikpeazụ 10 awa Iweputa ọrụ ozugbo n'ụzọ zuru ezu ebubo ma nwere a batrị ndabere, kwesịrị-enwe a zuru ezu enweghị ìhè anyanwụ mgbe akwakọba ume bụ ike ọgwụgwụ. The usoro a na-mgbe ụfọdụ naanị ọrụ ma ọ bụrụ na ụfọdụ kenyere ibiere na-zutere, dị ka a kpọmkwem na-agba, na nke na-eru nso ụgbọ okporo ígwè na-akpụ akpụ, ọmụmaatụ. Ọ nwere ike ịtọ ruo naanị ọkụ na oti mkpu ma ọ bụrụ na uru dị n'elu 65 mph ma na-eleghara okporo ụzọ, akpụ akpụ iji nwayọọ karịa na. Nhọrọ dịgasị iche iche.
Ọ bụ ezie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ike na a n'ụzọ zuru ezu webata ndụ nke nkezi onye ma, anyị pụrụ ịhụ ya edidu na ojiji amụbawanye site nkeji, abanye ọzọ na ndị ọzọ na ngalaba nke ndụ. Ọ bụ n'ezie ga-eme n'ọdịnihu nke mbara ala anyị na-anọchi anya ihe environmentally-adịghị ụzọ ịmakụ ọganihu enweghị n'ihu emejọ na-emebi emebi na siri itule na ọdịdị nke e oké mmetụta mmadụ. Solar-kwadoro ụzọ na ụgbọ okporo ígwè ngwọta na-ezi ihe nlereanya nke ndị bara uru, smart na ọnụ ngwa nke a oké eke akụ.
Anyị na-eche banyere gburugburu ebe obibi na anyị hụrụ n'anya nkà nke na-eme njem. Malite site ntinye akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè eme njem na Chekwa ụgbọ oloko, taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Uru Solar Powered ụgbọ okporo ígwè na-agafe n'ókè Ma Road ịrịba ama” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolar-powered-railroad-crossing-signal%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / tr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ na-asụ asụsụ nke gị nhọrọ.
Njem EcoFriendly	GreenEnergy	IndustrialEngineering	RenewableEnergy	SolarEnergy	Train Travel
Ọnụ ala European aga Olee otú Iji Nweta E
Njem ụgbọ oloko, Inzọ Njem Portugal, Ingbọ ologo Spain, Ingbọ njem njem Turkey
Top Atụmatụ N'ihi ejegharị With Your Anu ulo
Njem ụgbọ oloko, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
Ndụmọdụ Cargbọala, Njem ụgbọ oloko, Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Zụlite Travel Greece, Inzọ Njem Italytali, Njem Europe, Njem Iceland